Zavatra folo tokony hivavahana amin'ny 2021 | TOKO VAVAKA
Home vavaka Zavatra folo tokony hivavahana amin'ny 2021
Zavatra folo tokony hivavahana amin'ny 2021
Androany, hampianatra ny tenantsika momba ireo zavatra folo hivavahana amin'ny 2021 isika. Rehefa manomboka taona vaovao isika dia misy io synergy io izay mihalehibe ao anatintsika, izay indraindray miteraka fanahiana. Ao anatin'ny tebiteby mifandraika amin'ny fidirana amin'ny taona vaovao, mamela zavatra lehibe sasany isika ary mifantoka amin'ny tsy zava-dehibe. Tsy ampy ny hananana fanantenana, fa ny fanantenana kosa raha tsy misy asa dia foana, toa ny finoana tsy misy asa maty (Jak. 2:26).
Ny vavaka dia iray amin'ireo zavatra lehibe tokony hajaina indrindra eo am-panombohana ny diantsika mandritra ny taona. Ho an'ny sasany, ny vavaka dia mamoaka teny fotsiny, ka tsy heverina ho zava-dehibe. Ho an'ny hafa, ny vavaka dia endrika fangatahana atolotra amin'ny fotoana ilana izany. Ankoatra izany, ny vavaka dia fitaovana ifandraisana sy hifandraisana amin'Andriamanitra. Ny votoatin'ny vavaka dia tsy azo hamafisina satria i Jesoa, ilay Tompontsika dia nivavaka koa (Marka 1:35).
Fitaovana eo am-pelatanan'ny mpino rehetra ny vavaka. Izy io koa dia ampiasaina ho fitaovam-piadiana amin'ny fotoanan'ny ady ary azo ampifamadihana raha ilaina izany. Ny vavaka dia fifamofoana mihoatra ny natiora satria mahatafiditra ny olona sy Andriamanitra. Ny vavaka dia fitaovana entina milaza ny teny tenenina amin'Andriamanitra. Fihaonana sy fisehoana eo amin'ny sehatry ny vatana ny fahaterahan'ny vavaka. Ny vavaka dia mihoatra ny famoahana teny fotsiny. Tafiditra ao anatin'izany ny fampidirana ny vatanao sy ny fanahinao ary ny fanahinao. Andriamanitra dia mahita mihoatra ny teny izay imonomonanao na nolazainao rehefa fantany tsara.
Toy ny maha-zava-dehibe ny vavaka, ny fahalalana ny vavaka mety hatao dia zava-dehibe kokoa mba tsy hivavaka diso (Jak. 4: 3). Andriamanitra no niandohan'ny vavaka; noho izany, ny vavaka rehetra dia tsy maintsy afovoany manodidina Azy. Azontsika jerena ny vavaka modely ao amin'ny Mat 6: 5-15. Ny vavaka ataontsika dia tokony hifantoka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy amin'ny faniriantsika feno fitiavan-tena. Moa ve ianao tototry ny fahatsapana ny taona vaovao ary tsy fantatrao izay tokony hivavahana?.
Ireto misy zavatra 10 tokony hivavahanao amin'ity taona ity
Mivavaka ho an'ny sitrapon'Andriamanitra
Ny sitra-pon'Andriamanitra no takian'Andriamanitra ho antsika. Ny vavaka ho an'ny sitrapon'Andriamanitra dia midika hoe maneho ny fon'ny Ray eto an-tany. Mila mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika isika amin'ity taona ity mba tsy hihoatra ny fahefan'Andriamanitra.
Andriamanitra dia ao am-panahy ka mila olona ara-batana (izaho sy ianao) hanampy amin'ny fanatanterahana ny sitrapony ety an-tany (Mat 6:10) Ny vavaka ho an'ny sitrapon'Andriamanitra dia midika hoe maneke ny tenanao eo ambany fitarihan'Andriamanitra mba hanao aminao izay tiany ho azy. fanjakana fanjakana.
Mivavaka ho an'ny fahasoavana hametraka an'Andriamanitra ho lohalaharana
Ny taona vaovao dia mety ho tonga amin'ny alàlan'ny fanamby, fahasahiranana ary tsy fahatokisana, izay antenaina hoy i Said ao amin'ny bokin'i Isaia 43: 2.
Ny fametrahana an'Andriamanitra voalohany dia midika hoe mametraka Azy alohan'ny drafitra rehetra, fanapahan-kevitra na asa tsy misy idirany na kely aza. Midika izany ny famelana azy handray ny kodiarana rehefa miverina any aoriana isika.
Ny tombony azo avy amin'ny fametrahana an'Andriamanitra ho lohalaharana dia ny sasany amin'izany, tsy ho diso fanantenana ianao, fitahiana fanampiny, fifaliana betsaka sns
Mivavaka ho an'ny famindram-po sy ny fankasitrahan'Andriamanitra
Miara-miasa ny fankasitrahana sy ny famindram-po avy amin'Andriamanitra. Ireto roa ireto dia tena ilaina amin'ny dia ataon'ny lehilahy. Na ny Baiboly aza dia mirakitra fa nahita fitia teo imason'Andriamanitra sy ny olona i Jesosy (Lk. 2; 52) Mety ho sorena ny dia ataon'ny olona raha tsy misy famindram-po sy famindram-po. Ny famindram-pon'Andriamanitra dia tsy araka ny asantsika fa hoy Izy hoe 'Izaho dia hamindra fo amin'izay hamindrako fo' (Romana 9:15).
Ny fankasitrahan'Andriamanitra dia mampiavaka ny olona iray ary ny famindram-pony dia miresaka fitsarana (Jak. 2:13) .Ny vavaka ho an'ny famindram-po sy famindrampon'Andriamanitra amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainanao dia vavaka ilaina amin'ity taona ity.
Vavaka ho fiarovan'Andriamanitra
Ny fiarovana dia midika hoe mitazona zavatra / olona tsy ho voaro. Ny fiarovan'Andriamanitra dia manarona tontolo ara-panahy sy ara-nofo. Fiarovana ara-panahy amin'ny fanafihana fahavalo, fampitahorana izay manidina amin'ny alina, zana-tsipìka manidina amin'ny andro, ady ara-panahy sns. Ny Baiboly dia manamafy ny filàna fiarovana ara-panahy avy amin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Efesiana 6:12.
Fiarovana ara-batana amin'ny lozam-pifamoivoizana / tsy fahita firy, aretina, ratra, heloka bevava, bala mandehandeha sns Azo antoka ny fiarovan'Andriamanitra ary toy izany koa ny fampanantenany fiarovana.Salamo 91: 7-14 Niaro an'i Daniela tao an-davaky ny Liona izy, niaro ireo hebreo telo lahy tao lafaoro misy afo mirehitra, niaro an'i Mosesy zazakely tsy ho rendrika Izy, afaka miaro anao tokoa Izy.
Vavaka ho an'ny fanjakana sy ny firenena.
Mivavaha ho an'ny fiadanan'i Jerosalema, dia hambinina izay tia anao (Salamo 122: 6). Eo am-pelatanantsika ny soa ho an'ny fanjakantsika sy ny firenentsika, andraikitsika ny mivavaka ho an'ny fanjakantsika sy ny firenentsika, ho an'ireo mpitondra sy mpitondra ny fanjakana sy ny Firenena.
Amin'izao fotoana izao, ny dingana faharoa an'ny Covid-19 ao amin'ny firenena dia nitarika ny ain'ny maro, adidintsika ny mivavaka mba hahazo fiarovana amin'ny firenentsika toy ny novakiana etsy ambony. Ny vavaka ho an'ny fanjakana tsara tantana, fidirana an-tsehatra avy amin'Andriamanitra sns dia tokony hatolotra ho an'ny firenena isan'andro amin'ny maha olom-pirenena vanona anao.
Vavaka ho an'izay omen'Andriamanitra
Ny iray amin'ireo zavatra hivavaka ho an'ity 2021 ity dia ny fanomezana avy amin'Andriamanitra. Nomeny mana avy tany an-danitra ho an'ny Isiraelita Eks 16 dia nomeny sakafo koa ny dimy arivo ao amin'ny Mat 14: 13-21 avy amin'ny mofo 5 sy hazandrano 2. Manome ny vorona eny amin'ny habakabaka Izy, ary ny hazandrano anaty rano dia azo antoka fa afaka manome izay ilainao Izy, na fahendrena ara-bola, na fahendrena ara-pahasalamana, na filàna ara-panahy.
Vavaka ho an'ny fahasalamana.
Ny fahasalamana tsara dia iray amin'ireo fitaovana ilaina amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra indrindra indrindra amin'ny fitoriana ny filazantsara. Satria fantatsika rehetra ny dingana faharoa amin'ny Covid-19 ary ny fomba famonoana azy eo ho eo dia ilaina ny mangataka amin'Andriamanitra mba hanana fahasalamana tsara hiadiana amin'ity aretina mahafaty ity ary aretina sy aretina mahafaty hafa.
Ny mivavaka ho an'ny fahasalamana dia manan-danja toy ny fanarahana ny fepetra fiarovana rehetra.
Vavaka ho an'ny kamboty sy ny mpitondratena ary ny sahirana
Ny didy lehibe indrindra ao amin'ny Baiboly dia ny Fitiavana. Mat 22:37 Hoy ny Baiboly hoe "tiavo ny namanao tahaka ny itiavanao ny tenanao" Marka 12:31 Ny vavaka ho an'ny kamboty, ny mpitondratena sy ny sahirana dia vavaka ateraky ny fitiavana ary didin'i Jesosy koa ny hanaovantsika izany (1Tim 5: 3)
Mpandoa vola amin'ny fanelanelanana
Ny fanelanelanana dia midika hoe manelanelana na manelanelana olona roa. Ny vavaka fifonana dia midika hoe fiangaviana ho an'ny olona amin'ny toerana fivavahana. Raha mijery ny manodidina anao ianao, any am-piangonana, any amin'ny biraon'ny sekoly sns dia ho hitanao fa misy olona ao anaty toe-javatra tsy mahafinaritra, ny mivavaka ho azy ireo dia zavatra tokony hataonao amin'ny maha mpino anao Jakôba 5; tranga 16 tsy fantatrao.
Ny vavaka hahazoana vokatra
Milaza ny Baiboly fa mahavokatra sy mihabetsaha, Gen 1:28 Raha mahatsapa tsy mamoa ianao dia tsy zavatra tsara, amin'ity taona ity raha maniry vokatra ianao amin'ny fiovana rehetra amin'ny fiainanao dia tokony hatolotrao ity vavaka ity.
inona no hivavaka
Previous lahatsoratraVAVAKA MITSANGA NY VOAFIDIAN'NY PLANE amin'ny taona 2021
Next lahatsoratraVavaka hahombiazana amin'ny fanadinana